Zavatra 11 Azonao atao mba hampitsaharana ny fahatsapanao ho leo amin'ny fiainana - Blog
Zavatra 11 Azonao atao mba hampitsaharana ny fahatsapanao ho leo amin'ny fiainana
Ny hevitra momba ny fiainana ho fohy dia matetika atosika ho antony hamihina ny ankehitriny, hanaiky izay rehetra tokony hataon'ny olona iray hahitana ny fahasambaran'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Raiso, ohatra, ity teny nalaina avy tamin'i Paulo Coelho ity:
Fa fohy tokoa ve ny fiainana?
Marina fa ny fiainana dia mety hohafohezina noho ny zava-doza, ny aretina, na ny toe-javatra tsy ampoizina izay tonga tampoka aminao, fa ny fiainana tsy ho fohy ho an'ny olona maro.
Ho lava izao.
Efa am-polony taona maro.
Raha manaraka ny lalam-piainana nentim-paharazana ianao dia handeha any am-pianarana mandritra ny 20 taona voalohany amin'ny fiainanao, angamba bebe kokoa.
Avy eo, hiditra amin'ny tsenan'ny asa ianao amin'izay hiasanao angamba hividianana trano, hitaizanao fianakaviana, ary hitsitsiana vola ho an'ny fisotroan-dronono mandritra ny 30 na 40 taona.
Ary manantena aho fa hiala sasatra ary hiaina ny volafotsy sy ny taonanao volamena am-pilaminana sy fiononana noho ny asa napetrakao nandritra ny androm-piainanao.
Farafaharatsiny, izany no tokony ho drafitra - tsy mandeha foana ny fiainana amin'ny fomba kasaintsika.
Fa na izany aza, elaela ihany izany na mandeha araka ny drafitra na tsia ny zava-drehetra.
Ny fanaovana zavatra mitovy hatrany hatrany, isan'andro isan'andro, herinandro isan-kerinandro, volana isam-bolana, taona isan-taona dia manjary monotonous.
Mila fahasamihafana eo amin'ny fiainany ny olona, ​​na dia ireo mahazo aina amin'ny fiainana azo vinavinaina sy voarindra aza.
Ny tsy fahampian'ny karazan-karazany dia mamela ny olona hahatsiaro ho leo ary mety hiteraka fatiantoka amin'ny lafiny maro amin'ny fiainany.
Ity lahatsoratra ity dia handalina lalina an'ity fahasosorana feno fitaka ity. Hizaha ny zavatra tsapany, ny antony mahatonga azy ary ny fomba handresena azy io.
Ka ndao hitsambikina avy hatrany, sa tsy izany?
Inona no mahatsapa hoe mankaleo amin'ny fiainana?
Ny fahasosorana amin'ny fiainana dia tsy mitovy amin'ny fahasosoran'ny famolavolana.
Rehefa mahatsiaro mankaleo ny fiainana dia mifoha maraina ianao amin'ny tontolo tsy misy loko na hatsarana na fanentanana.
Mahatsiaro tsy misy dikany ianao. Tafintohina mandritra ny tontolo andro ianao, manao ireo zavatra takian'ny fiarahamonina hataonao, ary avy eo matory ary mianjera amin'ny torimaso mikorontana sy tsy milamina.
Na ny faran'ny herinandro aza - matetika toerana fitsaharana manaikitra avy amin'ny monotony amin'ny herinandro fiasana - tsy misy fifaliana ho anao.
Ny faritra rehetra ao aminao dia maniry ny hiova ny fiainanao, saingy tsy azonao fantarina ny fomba itiavanao azy hiova, ary tsy azonao atao ny mitondra ny tenanao manova azy.
Fantatrao fotsiny fa tsy maintsy… na ahoana na ahoana.
Mandra-pahatongan'izany dia hazo tratra ianao, mitsingevana eny ambonin'ny ranomasim-piainana, mandehandeha eny amin'ny onja fotsiny.
Mety manana fiainana fitsiriritana ny hafa aza ianao - fifandraisana mafy orina, asa tsara, ankizy falifaly, trano mahafinaritra, fananana manja - fa ianao sisa no maniry.
Mety ho tian'ny maro ianao ary hanana olon-kafa miankina aminao, nefa mahatsapa ianao fa tsy maintsy misy ny fiainana bebe kokoa noho ity.
Ary io fahatsapana io dia tsy teritery irery ao an-tsaina…
Ny fahasosorana amin'ny fiainana dia mitobaka ao amin'ny vatanao koa. Izany dia mety hiteraka aretin'andoha, henjana ny hozatra, olan'ny fandevonan-kanina ary tsy fahampian'ny angovo amin'ny ankapobeny.
Izany no fahatsapana ny fahasosorana marina sy mahavaky fo.
Mitovy amin'ny famoizam-po ve io fahasosorana io?
Ny valiny fohy dia: tsy foana.
Azonao atao ny miaina an'io fahasosorana lalina io nefa tsy voatery ketraka amin'ny fahatsapana ara-pahasalamana.
Ary afaka mijaly amin'ny famoizam-po ianao ary tsy ho mankaleo tanteraka amin'ny fiainana andavanandro.
Misy ny fifampitohizan'ny vondrona roa sy mety hisy ny fifandraisana eo amin'ny fahasosorana sy ny fahaketrahana.
Fa ny famoizam-po dia mety hisy vokany lehibe kokoa, koa raha tsy azonao antoka na kivy ianao, dia ilaina ny miresaka amin'ny dokotera na matihanina amin'ny fahasalamana.
Inona no andraikitry ny teknolojia amin'ny fanaovana izay hahasosotra antsika?
Mahaliana fa, na eo aza ny fahafaha-misafidy azo omena antsika amin'ny fialamboly, dia mbola mahita ihany isika fa leo sy misavoritaka.
Izahay dia mitondra fitaovana ao am-paosintsika izay ahafahantsika miditra amin'ny fialamboly eo noho eo sy ny fahalalana iraisana momba ny zanak'olombelona.
Ahoana no mahasosotra antsika amin'izany eo am-pelatanantsika?
Ny fampihetseham-po tafahoatra dia mpandray anjara. Safidy maromaro tsy miova ho an'ny fialamboly no hahatonga azy ireo ho toa tsy mahasalama sy mankaleo.
Rehefa afaka kelikely, dia mahita ny tenantsika mipetraka eo amin'ny sezalantsika isika, mikorisa amin'ny tambajotra sosialy tsy misy tanjona na manandrana mitady ny zavatra manaraka hijerena azy fa tsy mivoaka sy miditra amin'ny fiainana.
Ny ankamaroan'ny traikefa amin'ny Internet dia mifototra amin'ny fahafaham-po eo no ho eo. Vokatr'izany dia mihafohy ny salanisan'ny sain'ny olona.
Izany dia manasarotra ny fanaovana hetsika sarotra kokoa izay mety hanome dikany, fientanam-po na fialamboly tena izy. Mila fotoana vao voafehy ny ezaka rehetra.
Tokony hataontsika Mahareta ampy hananganana sy hitadiavana ireo zavatra tadiavintsika, na asa io, na fianakaviana, na fiainana misy dikany kokoa.
Nahoana no zava-dehibe tokoa ny fananana fiainana misy dikany?
Ny hevitra ao ambadiky ny tsy fahafaham-po maharitra dia ny olona iray tsy faly matetika amin'ny lalan'ny fiainany na ny làlan-dry zareo ankehitriny.
Tsy afaka mandositra ny ohatra rehetra amin'ny monotony isan'andro isika. Tsy misy tia mijoro amin'ny laharana, mandany fotoana mipetraka amin'ny fivezivezena, na manandrana manao zavatra liana amin'ny fivoriana tsy misy dikany.
Saingy indraindray dia ampahany ilaina amin'ny fandehanana amin'ny fiainana.
Ny marina ratsy dia, tsy misy olona ho faly foana. Fanantenana tsy mitombina izany ka hitarika fahantrana sy tsy fahafaham-po bebe kokoa.
Ny tsy fahafaham-po maharitra dia mitranga rehefa tsy afa-po amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ny olona iray.
Angamba ilay olona niaina fiainana milamina, mipoitra avy amin'ny asa tsy misy dikany ho amin'ny asa tsy misy dikany, fisakaizana ambany ho an'ny fisakaizana ambany, fifandraisana poakaty ho an'ny fifandraisana poakaty.
Sarotra amin'izy ireo ny mahita fifaliana amin'ny zavatra rehetra satria mahatsapa izany rehetra izany ambany loatra ary tsy misy dikany.
Io fiamboniana io dia afaka miteraka fihetsika sy aretina maro tsy salama - ao anatin'izany ny fidorohana zava-mahadomelina sy alikaola, fahaketrahana ary fitaintainanana.
Indraindray dia mifanohitra amin'izay no izy, izay ny famoizam-po no tena antony tsy fahatsapana fifaliana na fahasambarana amin'ny fianan'ny tena.
Ireo fahatsapana poakaty ireo dia mety hahatonga ny olona hirotsaka an-tsehatra fitondran-tena manimba tena mba hanandramana hanaparitaka ny hakiviana amin'ny fiainany fotsiny.
Angamba izy ireo mamiravira fifandraisana amin'ny tany satria tsy faly izy ireo na manao sabotage amin'ny faritra hafa amin'ny fiainany mba hamoronana tantara an-tsehatra sasany.
Tsy midika izany fa ny fihenan-tsasatra rehetra na ny fanasarana dia zavatra ratsy. Io dia tsy.
Ny olona iray dia tsy maintsy maka fotoana fialan-tsasatra sy fanasitranana alohan'ny hidirany amin'ny fialam-boly hafa, fialamboly na fitsangatsanganana. Raha tsy izany dia atahorana handoro tena ianao ary hahita ny tenanao amin'ny voalohany. Zava-dehibe ny filalaovana tena.
Midika inona aminao ny fananana fiainana misy dikany?
Ny hevitra fiainana misy dikany dia iray izay manome fahafaham-po manokana, fahatsapana fahombiazana, ary fahasambarana sasany.
Mifanohitra amin'ny media sosialy sy ny hevitry ny feo, ny olona iray dia tokony hitandrina ny amin'ny fahasambarana mihoa-pampana misy dikany. Tsy mifandrindra foana izy roa.
Ohatra, angamba misy mpiasa sosialy izay miorim-paka lalina amin'ny fiezahana hanampy ny mpanjifany hanatsara ny fiainany.
Mety hitondra zava-bita sy fahafaham-po be izany, saingy sarotra ny mijery ny olona mijaly isan'andro.
Hafahafa ny mieritreritra fa hahita ny fahasambaran'izy ireo amin'ny tolona sy ny lafiny maizina amin'ny fiainana, fa misy kosa ny olona mahita. Ny olona sasany mivelatra amin'izany.
Ny sasany aleony mifanohitra ary miady ho an'ny zavatra misy dikany amin'izy ireo, mba ho ampahan'ny zavatra lehibe kokoa noho izy ireo. Ary avy eo, manome azy ireo fahafaham-po sy fahasambarana manokana izany, saingy tsy fahendrena ny manantena azy.
Ny fidobohana ao anaty sy ny fijaliana matetika tsy tapaka dia afaka mitarika olona iray ho amin'ny fahaketrahana mora foana raha tsy afaka compartalisation sy hikarakara tsara ny tenany izy ireo.
Amin'ny fomba samihafa no ahitan'ny olona dikany.
Ho an'ny sasany, hiasa amin'ny asa falifaly sy falifaly ananany izy ireo. Ny hafa dia mety hahita ny dikany amin'ny fambolena sy fitomboana fianakaviana be fitiavana.
Ny sasany mety mahita izany amin'ny fanompoana ny hafa na ny marefo. Mety hitan'ny artista amin'ny famoronana izany. Mety hitan'ny mpahay siansa amin'ny fahitana izany. Misy làlana tsy manam-petra, izay azo atao amin'ny ambaratonga sasany.
Tsy misy lalana voafaritra sy tokana mankany amin'ny fahasambarana, dikany ary mahatsapa afa-po amin'ny fiainana . Ho any ny lalanao tokana aminao .
Mety hizara fitoviana amin'ny olon-kafa izy io, saingy ho irakao ny mamantatra izay làlana izay misy dikany indrindra aminao sy manenjika azy.
ahoana no ahalalanao fa tapitra ny fiarahana
Tsy midika izany fa mila mandeha irery ianao na tsy misy afaka manampy anao amin'ny lalanao, fotsiny fa tsy tokony antenainao ny olon-kafa afaka manolotra azy io anao fotsiny ao anaty fonosana madio misy tsipìka eo amboniny. Tsy azo inoana izany.
Ahoana no ahitako izay manome dikany sy fahasambarana amin'ny fiainako?
Tsotra toy izany.
Toa noforonina ity, saingy ny fomba tokana hahitanao izay manome fahasambarana, fahafaham-po ary dikany amin'ny fiainanao dia ny fahazotoana mandray anjara amin'ny fiainana sy manao zavatra.
'Fa ahoana raha tsy tiako izany?'
Dia tsy manao izany ianao. Ary miroso amin'ny zavatra hafa ianao.
Na dia manao zavatra tsy voatery tianao na tianao aza ianao dia manitatra ny fahalalanao sy ny fomba fijerin'izao tontolo izao, izay manome anao fahaizana mifandray amin'ny olona maro kokoa ary manamora ny fahatakarana tsara kokoa ny zavatra ataonao sy tsy tianao.
Mety tsara ny vintana fa hanao zavatra vitsivitsy tsy tianao ianao alohan'ny hahitanao zavatra misy dikany izay ataonao.
Na mety tsy hanao izany ianao! Angamba ianao hanandrana zava-baovao ary hitanao fa manome fahafaham-po sy fahatanterahana izany.
“Saingy tsy zakako izany!”
Tsy mila lafo izany. Tsy mila miondrana an-dàlana amin'ny $ 5,000 mankany amin'ny paradisa tropikaly ianao mba hahitanao ny tenanao.
Makà karatra famakiam-boky, mamaky na mihaino boky vitsivitsy. Manaova asa an-tsitrapo amin'ireo mahantra na biby. Meteza ho mpanolotsaina olona mitady ny làlan-kalehany. Makà fampianarana zavakanto any amin'ny foibem-pokontany.
Ireo zavatra ireo dia fomba tsy dia lafo loatra hitomboana amin'ny maha-olona anao sy hiaina zava-baovao nefa tsy hanao selfie ao Machu Picchu na hotafihin'ny mpanakanto sy mpivarotra amoron-dàlana ao Kairo.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fanaovana zavatra. Ny zavatra rehetra dia tsara kokoa noho ny tsy misy. Raha tsy mety aminao izany dia ovao ny zavatra ataonao ary manandrama zava-baovao.
Ahoana ny amin'ny andrasan'ny fiaraha-monina amiko?
Ny idealista, ny mpanakanto, ny mpandinika maimaim-poana dia mety ho tonga leo sy voafetra amin'ny rafitra henjana amin'ny fanajana ny fiaraha-monina indraindray.
Ny olana dia miharatsy noho ny tsindry ara-tsosialy ataon'ireo mitovy taona aminy sy vondrona misy azy mba hiditra ao anaty boaty mora azo sy ahazoana aina.
Toerana ahazoana aina ho an'ny olona sasany ny boaty. Misy olona any izay faly kokoa mandray ny fomba fijery nentin-drazana ny zavatra andrasan'ny fiaraha-monina amin'izy ireo satria manolotra làlana mazava izy io, izay inoany fa hanome azy ireo fahasambarana sy fahafaham-po.
Ny olana dia tsy ny rehetra no tafiditra ao anatin'io boaty io.
Mbola ratsy kokoa aza, ny fiarahamonina dia tia manangona henatra, fanakianana ary fanesoana amin'izay manapa-kevitra ny hisongadina amin'ny vahoaka ary manontany tena momba ny toe-piainana misy.
Ny marina mampalahelo dia tsy azo ovaina izany. ny fanahy malalaka eto amin'izao tontolo izao mila mahay mamily ny eritreritra mankahala sy ny fitsikerana tsy mendrika raha manantena ny hahita ny dikany sy ny fahafaham-pony manokana izy ireo eo amin'ny fiainana, satria ny lalana voadaroka dia tsy natao ho azy ireo fotsiny.
Angamba natao hanao zavatra bebe kokoa izy ireo. Angamba izy ireo dia natao hitondra hazavana any amin'ny toerana maizina, handrisika ny fisainana malalaka ary hanampy amin'ny famongorana ireo sakana ara-tsosialy izay misy fiatraikany ratsy amin'ny olon-kafa.
Ny fanahy malalaka dia mety hijanona ary halazo ao anaty tontolo mamoritra sy milamina toy ny ambaratongam-piaraha-miasa na toy ny ray aman-dreny mipetraka ao an-trano.
Azon'izy ireo atao ve ireo? Azo antoka. Ny olona dia afaka manao zavatra be dia be izay tsy dia mifanentana aminy akory. Tokony hanao izany ve izy ireo? Eny, izany fanontaniana izany izay tsy azon'ny olona tsirairay valiana ihany.
Na dia manao izany aza izy ireo dia mila afaka mamoritra ny fahaizany mamorona sy ny toe-panahin'izy ireo raha te hahaliana sy hirotsaka amin'ny fiainana izy ireo.
Mety hidika izany fa fialan-tsasatra isan-taona any amin'ny kilasy mahaliana, kanto na dihy, na zavatra tena mamporisika ny fototry ny fanahin'izy ireo ary manome aingam-panahy.
Inona no azontsika atao mba hialana amin'ny fahasosoran'ny fiainana?
Alohan'ny hahitanao ny fomba mety indrindra hiadiana amin'ny fahasosoranao, tokony hodinihinao ny fototr'izany.
Moa ve ianao mankaleo fotsiny amin'ny fahamendrehana amin'ny fiainanao? Satria manirery ianao? Satria tsy mahatsiaro fanamby ianao?
Mankaleo ve ny fiainanao satria niteraka anao ny olona tamin'ny fiainanao? Tsy misy na inona na inona amin'ny hoavinao mahaliana anao?
Mahatsiaro ho teritery ve ianao noho ny toe-javatra tsy afaka mifehy ny fiainanao?
Manana tahirin-kery sy potika tsy voatanisa mbola mila fivoahana ve ianao?
Miaina fiainana tsy marina ve ianao, manandrana ho olona iray tsy ianao?
Arakaraka ny ahafahanao manatsara ny antony (ny) mankaleo anao amin'ny fiainana no mahaliana anao kokoa rehefa mivoaka ianao ka mifanerasera aminy.
Ireto misy zavatra vitsivitsy fotsiny azonao andramana hanamaivana ny fahosanao.
1. Midira amin'ny asa an-tsitrapo na fanampiny fanampiny miaraka amin'ny fikambanana.
Ny asa an-tsitrapo dia fomba iray faran'izay tsara hiantsorohana andraikitra, hihaonana amin'ny olona vaovao ary hanomezana zavatra tsara ho an'izao tontolo izao.
Betsaka ny fikambanana mila ny zava-drehetra manomboka amin'ny asa tsy an-kijanona ka hatramin'ny asa mahay. Mety ho azonao atao aza ny mametraka ny fahaizanao sy ny fahalalanao matihanina hiasa amin'ny antony manan-danja.
Safidy iray hafa ny manatevin-daharana fikambanana matihanina mifandraika amin'ny sehatra misy anao. Manampy amin'ny famotehana ny fahasosorana sy ny monotony fotsiny izy io, fa ny fifandraisana amin'ny olona vaovao izay azonao atao ny mampivelatra fifandraisana matihanina.
2. Mianara fahaiza-manao vaovao.
Misy fomba maro handehanana amin'ny famolavolana karazana fahaiza-manao vaovao. Feno horonan-tsary sy torolàlana momba ny fomba hanombohana hetsika samihafa ny Internet.
Azonao atao ihany koa ny manapa-kevitra fa ny fiverenanao any amin'ny oniversite mba haka taranja fanampiny dia mety.
Ny fampianarana any amin'ny oniversite dia manome firafitra, fitarihana ary fidirana amin'ny olona iray izay mahalala momba ny fahaizana ianaranao.
Ny oniversite an-tserasera dia afaka manamora ny fanatrehana fampianarana raha manana fiainana be atao ianao.
3. Mamorona finamanana vaovao eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina.
Aiza no ahitanao namana vaovao? Mety misy hetsika eo an-toerana mandeha amin'ny toerana ahafahanao mihaona amin'ny olona hafa avy amin'ny faritra misy anao na vondrona fialamboly izay misy fihaonana matetika.
Ny olona mpivavaka dia mety maniry ny hanatrika fotoam-pivavahana na hetsika mahazatra karakarain'ny toeram-pivavahany.
Ny vondrona haino aman-jery sosialy eo an-toerana dia mety ho toerana tsara hahitana hetsika na fihaonana.
4. Mitsangatsangana amin'ny toerana mbola tsy nalehanao.
Tsy mila lavitra sy lavitra ny dia mba hanampy anao hitarika fientanam-po amin'ny fiainanao.
Mety ho tsotra toy ny mivoaka ivelan'ny tanàna mankany amin'ny toerana sasany ahafahanao miala sasatra sy miala sasatra.
Angamba fampisehoana tsy ao an-tanàna sy alina ao amin'ny hotely?
Dia mankany amin'ny valan-javaboary na fanintonana voajanahary hafa?
Na angamba manangom-bola ary manaova somary lavitra any aoriana mba hiova endrika lehibe kokoa.
Na dia fitsangatsanganana an-dàlana iray andro aza dia mety ho fialan-tsasatra mahafinaritra amin'ny andavanandrom-piainana.
5. Mitadiava asa vaovao na miova asa.
Tsy mahazatra ny olona mankaleo amin'ny farany amin'ny safidiny asa na asa.
Mety ho hitan'izy ireo mihitsy aza fa diso ny safidy nataony tamin'ilay asa tokony harahiny sy ilana hijerena safidy hafa.
Ny safidy hiala amin'ny asa sy / na hanova ny làlan'ny asa dia tsy maivana velively, fa mety ilaina ny mahita fahasambarana sy fiadanam-po bebe kokoa amin'ny fiainanao.
Ny sasany dia mitaky fotoana be loatra na hery ara-pientanam-po fotsiny. Ny hafa dia mety tsy manome fanentanana ampy na manome anao ny efitrano hitombo izay tena tadiavinao.
Raha tsy faly ianao na afa-po amin'ny asanao, dia mety ho tonga ny fotoana manomboka mitady fanovana.
6. Miasà mazoto ary manaova fanatanjahan-tena.
Ny fiasa sy ny fanatanjahan-tena dia tena mahasoa amin'ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina. Ny dokotera dia miantso ny fomba fiaina mipetrapetraka ho toy ny fifohana sigara vaovao manoloana ny risika ara-pahasalamana.
Ary miaraka amina asa maro izay atao ao ambadiky ny birao mandritra ny andro lehibe iray, dia tsy mahagaga raha lasa kivy kokoa amin'ny fiainany ny olona.
Mila fampihetseham-batana ny olona hanampiana amin'ny fanentanana ireo akora simika tsara vokarin'ny vatanao rehefa manao ireo hetsika ireo ianao.
Manomboha kely ary mametraha tanjona vitsivitsy hivoahana sy hiasa. Ary raha efa mazoto ianao dia mametraha tanjona matanjaka kokoa - toy ny famitana marathon na fanatsarana ny fahaizanao.
7. Mamorona zavakanto vitsivitsy.
Matetika ny mpanakanto an'izao tontolo izao dia voatosika hamorona amin'ny fomba hafa. Betsaka ny olona voahidy noho ny hevitry ny hafa na satria mandà azy ireo fotsiny ny fotoana mety ny fiainana.
Ny mpanakanto iray izay nijanona tsy namorona intsony dia tokony hieritreritra ny hiverina aminy. Manampy amin'ny famolavolana ny saina mamorona ny zavakanto ary manome a fahatsapana fieboeboana ary ny zava-bita amin'ny asan'ny tena.
Midira amin'ny vondrom-piarahamonina mpanakanto salama izay mampihatra ny salantsalany ihany ary miasa amin'ny fanatsarana sy famaranana ny sanganasao.
Tsy mila mahay be ianao amin'izany. Vitsy dia vitsy ny olona. Ny zava-dehibe dia ny fandraisana ny zavakantoo raha mitondra fahasambarana ianao.
8. Mandany fotoana misy kalitao bebe kokoa amin'ireo olon-tianao ary manapaha olona misy poizina.
Zava-misy fanta-daza fa ny fandaniana fotoana be kalitao miaraka amin'ny olon-tianao dia mahatonga ny saina hamokatra zavatra simika mahatsapa maro toy ny endorphins.
Mora loatra ny mamela ny fisakaizana sy ny fifandraisan'ny olona iray amin'ny fiainana be atao amin'ny tsirairay.
Ny olona iray dia tsy maintsy manandrana mitazona ireo fifandraisana ireo tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fiezahana hijanona hifandray amin'ireo namany sy fianakaviany.
Midika izany matetika fa mandeha any amin'ny fivoriana sy zavatra izay tsy voatery ho tianao na tianao haleha.
Misy kofehy iraisana amin'ny tsy faniriana hanao fiaraha-monina na reraka loatra handray anjara, fa raha tafiditra amin'izany lamina izany ianao, dia handao anao ny fiainana.
Manatreha zavatra rehefa nasaina ianao, na miezaha hanipy fety anao manokana raha tsy dia mandeha loatra ianao.
Ary hevero ny fanalana ireo olona misy poizina amin'ny fiainanao raha misy izany. Izy ireo dia fantsom-pifandraisana mahery vaika amin'ny fahasambarana sy fiadanan-tsaina.
9. Mitadiava tanjona na antony lehibe kokoa noho ianao.
Tia olona ny olona . Tian'izy ireo koa ny mandray anjara amin'ny zavatra lehibe kokoa noho izy ireo.
Mitady tanjona na ny antony hampitoviana ny tenanao sy ny fahaizanao miaraka dia afaka manome ny hambom-po sy ny fahasambarana amin'ny fanovana eo amin'izao tontolo izao.
Toa mora kokoa izany hoy izy noho ny vita, saingy tena misy hetsika sy vondrona maro manandrana manaova fanovana tsara eto amin'izao tontolo izao azonao atao ny mandray anjara.
10. Mametraha sy miketraha tanjona izay hanome anao fahatsapana fahombiazana.
Ny fametrahana tanjona dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny tena sy ny fahatsapana toy ny hoe misy mahavita zavatra amin'ny fiainany.
Mora mivezivezy tsy misy tanjona na tari-dalana, Fa ny fanaovana izany dia manakana anao tsy hanana fahatsapana ho misafidy zavatra tianao hatao sy hanatanterahana izany, fahatsapana izay afaka manome doka dopamine tsara rehefa miampita azy amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao ianao ary mahazo voka-dratsy.
Betsaka ny fomba fiasa amin'ny fametrahana tanjona, fa amin'ny ankapobeny ny olona iray dia te-hametraka tanjona fohy, antonony ary lavitra ho an'ny fiainany.
Mety misy ifandraisany amin'ny fahasalamanao, ny asanao, ny fiainanao manokana, na ny fialam-bolinao.
11. Atsaharo ny fanaovana zavatra tsy manaitaitra anao na mitondra fifaliana ho anao.
Talohan'izay dia niresaka momba ny fanandramana zava-baovao hahitana ireo izay mitondra fahasambarana sy dikany ho anao izahay.
Fa ahoana ny amin'ireo zavatra ataonao rehetra amin'izao fotoana izao aza afaho ve ny iray amin'ireo fahatsapana ireo?
Avereno atao ny fampiatoana azy ireo.
Tsy midika izany fa azonao atao ny manalavitra ny andraikitrao rehetra ankehitriny. Rehefa dinihina tokoa, raha manana olon-kafa miankina aminao hanome vola sy / na hikarakara azy ireo ianao dia tsy maintsy manatanteraka ireo fanoloran-tena ireo.
Jereo anefa ny fiainanao sy ireo zavatra ataonao ary manontania tena hoe misy dikany aminao ve izany.
Angamba miantsena fotsiny ianao mba hiantsenana.
Na mijery vaovao isan-kariva ianao mba hamenoana ny fotoana fotsiny.
Na mety fety mafy ianao isaky ny zoma alina tsotra izao satria ny namanao rehetra no manao izany ary nahavita azy foana ianao.
Raha misy zavatra tsy mahatsiaro tena ho mendrika amin'ny fotoanao intsony dia aza atao izany.
Azafady mba mariho: zava-dehibe ny hiresahanao amin'ny matihanina mba hahalalanao raha mijaly amin'ny fahaketrahana ianao alohan'ny hiala amin'ny zavatra mety nahafaly anao taloha. Araka ny voalaza tetsy aloha, ny famoizam-po dia mety ho antony mahatonga anao ho leo sy tsy faly.
Fiainana tsy misy mankaleo…
… Fiainana misy tanjona kendrena. Tsy dia maninona izay tanjonao, raha mbola mahita iray ianao.
Ny fomba tsara indrindra hahitana iray dia ny miala eo fotsiny ary manomboka manao zavatra.
Mety ho hitanao fa ireo zavatra nofidianao hatao dia tsy voatery hitarika anao amin'ny fientanam-po na fahasambarana, fa mety hanome anao fahalalana, traikefa, na olona ilainao ny manitsaka lalana hafa.
Aza avela hanelingelina anao ny malaise na ny fahaketrahana. Miverena any ary manandrama hatrany.
Ary raha hitanao fa sarotra be izany na tsy mahita fitarihana samirery ianao, dia mety ny mitady fanampiana avy amin'ny mpanolo-tsaina momba ny fahasalamana ara-tsaina na mpanazatra fiainana.
Aza misalasala mitady fanampiana raha sendra fotoan-tsarotra ianao ary tsy azonao antoka ny lalana tokony haleha.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hampijanonana ny mankaleo amin'ny fiainana? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Mba hanovana ny fiainanao ho tsara kokoa dia manana safidy 2 ianao
Hira 5 fahavaratra
mitanisa momba ny fatoriana amina lehilahy manambady
inona no resahina